Product Description Description: Plastic Rapid lafiny prototyping: 600 * 300 * 200mm fandeferana: +/- 0,05 MM fitsaboana tena toetrany: Hand Nikosokosoka Color: fotsy na fanao Fampiharana: Industrial Product Nahoana no nifidy antsika? Isika hanatitra ny anankiray-mijanona haingana vahaolana ho an'ny asa prototyping! Youde efa nandroso haingana nitranga fahiny andalana fanodinana ny vokatra. Manana orinasa mpamokatra entana mahery fahaizany, CNC machining foibe, ...
Description: Plastic Rapid prototyping lafiny: 600 * 300 * 200mm
Color: fotsy na fanao Fampiharana: Industrial Product
Isika hanatitra ny anankiray-mijanona haingana vahaolana ho an'ny asa prototyping!
Youde efa nandroso haingana nitranga fahiny andalana fanodinana ny vokatra. We have powerful manufacturing capability, CNC machining centers, 3D Printing, plus auxiliary equipment like milling machine, Sand Blasting Machine, drilling machine etc and the cooperation of our partners, we are able to support every different components of the prototyping
Maherin'ny 11 taona varotra sy ny orinasa mpamokatra entana traikefa.
Small mba tsy ampy
Tsara dia tsara vidiny ambony kokoa noho ny fanompoana Good.
Asa mafy ny ekipa QC mpiasan'ny antoka ny toetra marin-toerana.
Well- Niaina manome famokarana ho an'ny famolavolana sy OEM Custom filaminana.
1. Custom CNC Machining Service: Ataovy miavaka machining karazana vy sy plastika faritra faritra araka ny sary na saryCustom
2. Custom 3D Pirinty natao tamin'ny tolotra: afaka mpanamboatra haingana amin'ny slå sy SLS araka ny vokatra takiana.
3. Custom Silicone bobongolo Vacuum mandatsaka: kely izahay mba hanatitra ny fotoam-pitsarana mihazakazaka tolotra to you by silicone bobongolo vacuum fanariana.
4. Manaova nitranga fahiny: Tonga soa eto amin'ny manao ny nitranga fahiny
NY haingana PROTOTYPING fahaiza-
CNC machining, 3D fanontam-pirinty (slå), Silicon bobongolo fanariana, tamin'ny laser fanapahana, hiondrika sns
ABS, PC, PP, PMMA, PE, POM, PA, fingotra, Silicone, sns
Aluminum na zavatra hafa ara-nofo: varahina Bronze, Copper, Stainless Steel.
Size: 2000 * 1200 * 1000mm na namboarina
Prototyping endri-javatra (endrika)
Namboarina, dia afaka machining ny endri-javatra sarotra
Hoso-doko, poloney, landy-pirinty, anodize, mangarahara ambonin'ny, translucent ambonin'ny, borosy, fingotra menaka, electroplate.
Available raki-daza format
Tsara dia hanome ny soso-kevitra na ny fonosana fonosana araka ny fepetra.
Afaka manaova fotoana mba hanafaka avy amin'ny DHL / FEDEX / UPS sns, na araka ny mpanjifa ny fepetra.
Previous: Fast plastika Prototyping Service
Manaraka: Avo poloney surface aluminium prototyping
kely CNC Rapid Prototyping
Kalitao avo plastika haingana prototyping